VALORANT ရဲ့ Agent အသစ် KAY/O ကတော့ Radiants တွေကို Suppress Ability နဲ့ ဖယ်ထုတ်ဖို့ ရောက်ရှိလာပါပြီ | Codashop Blog MM
Home Games VALORANT ရဲ့ ...
VALORANT ရဲ့ Agent အသစ် KAY/O ကတော့ Radiants တွေကို Suppress Ability နဲ့ ဖယ်ထုတ်ဖို့ ရောက်ရှိလာပါပြီ
စက်ရုပ်တွေဟာ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေမှာ အရေးပါတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာပါဝင်လာကြပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ ဒီစက်ရုပ်လူသားတွေဟာ gamer တွေရဲ့ မှတ်လောက်သားလောက်တဲ့အသင်းသား (ပြီးတော့ ရန်သူ) တွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဒီမှာတော့ Clank ( Ratchet and Clank ရဲ့ Clank), Titanfall2ရဲ့ BT-7274, Apex Legends က Pathfinder နဲ့ X-Men ရဲ့ the Sentinels တောင်ရှိပါသေးတယ်။ Riot ကလည်း KAY/O ဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကို VALORANT ရဲ့ အသစ်လွင်ဆုံး အေးဂျင့်အဖွဲ့ဝင်အသစ်အဖြစ် ထည့်သွင်းလိုက်ပါပြီ။
KAY/O က သူ့ရဲ့ VALORANT ပွဲဦးထွက်ကို Episode3Act I မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် Initiator အနေနဲ့ သူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်က radiants တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ပါပဲ။ ဒီစက်ရုပ်လက်နက်ကြီးဟာဆိုရင် ရန်သူတွေရဲ့ အေးဂျင့်စွမ်းရည်တွေကို ပျက်ပြယ်စေခြင်းဖြင့် ရန်သူတွေကို ဖိနှိပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ သင့်အတွက် သိပ်မမိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ ultimate က သူ့အသင်းသားတွေကို သူ့ရဲ့ core ကို တည်ငြိမ်စေပြီး သူ့ကိုပြန်ကယ်တင်နိုင်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလူသတ်စက်ရုပ်ကြီးက ဂိမ်းထဲမှာ တော်တော်ခေါင်းကိုက်အောင်လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ခုတော့ ဒီအေးဂျင့်အသစ်အကြောင်းနဲ့ သူဟာတိုက်ပွဲထဲကို ဘာတွေယူဆောင်လာမလဲဆိုတာကိုပိုသိအောင်လုပ်ကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
KAY/O ရဲ့ စွမ်းရည်တွေကတော့ အောက်ပါတို့နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။
KAY/O ရဲ့ အဓိကစွမ်းရည်ကတော့ သူက သူပထမဆုံးကြုံရတဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ချေဖျက်တဲ့ဓားသွားတစ်ခု လှမ်းပစ်လိုက်ပြီး ထိတာနဲ့ပေါက်ကွဲစေပြီး ဒီပေါက်ကွဲတဲ့ဧရိယာတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့သူ မှန်သမျှကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
စနက်တံတိုလေးကုန်သွားတာနဲ့ ထပေါက်မယ့် မီးလင်းတဲ့ လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးတပ်ဆင်ထားပြီး ပေါက်ကွဲတာနဲ့ တန်းတန်းမြင်နေရတဲ့ သူအကုန်လုံးရဲ့ အမြင်အာရုံကို ပျက်စီးစေမှာပါ။
ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို အဝေးကနေ လှမ်းပစ်ပြီးတော့ အဲဒီအရာဟာ ကြမ်းပြင်မှာကပ်နေပြီး အကြိမ်ပေါင်းများစွာပေါက်ကွဲပြီး သေလောက်တဲ့ damage ကို ပေါက်ကွဲမှုရဲ့အလယ်ဗဟိုကနေထုတ်လွှတ်ပါတယ်။
KAY/O ရဲ့ ultimate ဟာ သူ့ကို radianite စွမ်းရည်လို့ခေါ်တဲ့ မိမိရဲ့တည်နေရာကနေအားဖြည့်လွှတ်ထုတ်နိုင်ပြီး စွမ်းအားကြီးတဲ့ အားအင်လှိုင်းများနဲ့ သူ့ကို အဆမတန်အားဖြည့်ထားပါတယ်။ ဒီအားအင်လှိုင်းတွေနဲ့ထိမိတဲ့ရန်သူတွေဟာ ခဏတာဖိနှိပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အားဖြည့်နေစဉ်အတွင်းမှာ KAY/O အသတ်ခံရရင် သူဟာ မတည်မြဲတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိပြီး အသင်းသားတွေက သူ့ကိုပြန်လည်ကယ်တင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးပါတယ်။
KAY/O ရဲ့အားအင်က အဓိကအနေနဲ့ သူဟာ ရန်သူတွေရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဖိနှိပ်နိုင်တဲ့တစ်ဦးတည်းသောအေးဂျင့်ဖြစ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ Jetts ရဲ့ စွမ်းအားတွေကို ပျက်ပြယ်စေတာကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ် (ပြီးတော့ Jett ရဲ့ အသင်းသားအနေနဲ့ သူ့ကိုဘယ်လိုပြန်ကယ်နိုင်မလဲဆိုတာရောပေါ့)။ သူ့ကို information ပေးခြင်းဖြင့် ( ရန်သူရဲ့နေရာလိုမျိုးပေါ့) သူ့ရဲ့ ဖိနှိပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုပေါ်လွင်စေဖို့ အဓိကပါပဲ။ ရန်သူတွေသူတို့ကို သူတို့ကယ်တင်ဖို့ သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေမရှိဘဲ အသုံးမဝင်ဖြစ်နေမယ့်ပုံကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒီလူသတ်စက်ရုပ်က VALORANT ကစားသူတွေကို သူတို့ရဲ့ FPS အမြစ်တွေဆီသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ A-game ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ လတ်တလော VALORANT meta ကို လှုပ်ကိုင်နိုင်မလား? မကြာခင်မှာသိရတော့မှာပါ။
သင့်ရဲ့ VALORANT Points တွေကို Codashop မှာ ပြန်ဖြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းအများကြီးရှိတဲ့အပြင် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး လျင်မြန်စွာ ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
Previous article#GirlSquad မှာဘယ် မိန်းကလေး Gamer ပါဝင်သင့်သလဲ?
Next articleLeague of Legends: Wild Rift မှာ သင့်ကို rank မြန်မြန်တက်ပြီး Challenger ရောက်ရန် အကြံပြုချက်များ